Fametrahana sy fampivoarana ny maody sy lohahevitra Dolibarr | Dolibar MarketPlace
Fametrahana sy fampivoarana ny maody sy lohahevitra Dolibarr
Dolibarr dia samy ERP & CRM izay lasa rindrambaiko voalohany amin'ny fitantanana ny asa matihanina na mpiara-miasa toy ny fitantanana ny fifandraisana, ny faktiora, ny baiko, ny teny, ny tahiry, ny tetikasa, ny vola miditra, ny diary, sns. ERP Dolibarr dia rindrambaiko malalaka malalaka mety ho an'ny SME, TPE, miasa tena na fikambanana, raha fintinina dia io no Open Source ERP tsara indrindra ho an'ny taona 2020, Tohanan'ny fikambanana sy vondrom-piarahamonina miteny frantsay.
Dolibarr dia rindrambaiko marin-toerana sy manan-tsaina satria naorina tsara tamin'ny fotony voalohany. Ny maody sy ny lohahevitra dia azo ampiasaina araka ny filanao ary misy môdely sy plugins fanampiny azo alaina ao amin'ny tsenan'ny Dolistore sy ny tsenan'ny Dolibarr Store.
Ny fivoarana mifameno sy ny fampifanarahana ny maody sy ny lohahevitra dia mora eritreretina ary tohanan'ny orinasa an-jatony manome tolotra ho an'ny Dolibarr toa ny anay.
Fametrahana sy fanamafisana Dolibar:
Ny fivarotana Dolibarr Startup dia manolotra serivisy fametrahana sy fanamafisana ho an'ny rindrambaiko Dolibarr anao ary manoro hevitra anao izahay momba ny fepetra fiasana tsara indrindra.
Famolavolana maody manokana nataon'ireo manam-pahaizana momba ny Dolibarr:
Ny manam-pahaizana momba ny fivarotana Dolibarr dia manampy anao hampivelatra ny filanao manokana mifandraika amin'ny orinasanao izay tsy mamaly an'i Dolibarr, na amin'ny fomba tsy feno, dia afaka mamolavola maody manokana vaovao mamaly tsara ireo orinasa fototra maromaro izay tsy mandrakotra an'i Dolibarr.
Vao haingana izahay no namolavola maody sy lohahevitra 12 mahery ho an'ny Dolibarr:
1- Dolibarr Extranet - Tranonkala sy mpanjifa Extranet - Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *
2- BlueTheme - Lohahevitra vaovao avy amin'ny Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *
3- Famantaran'ny mpiasa - Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *
4- OrangeTheme - Lohahevitra vaovao avy amin'ny Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *
5- Lohahevitra Revolution Pro Dolibarr 6.0.0 - 12.0. *
6- Fikarohana mivantana AJAX Dolibar 6.0.0 - 12.0. *
7- Lohahevitra maoderina - lohahevitry ny Dolibarr 6.0.0 - 12.0.3
8- Dolibarr Pay Slip - na Pay Slip
9- Fitantanana, famandrihana ary fandrindrana ny efitrano 6.0.0 - 12.0.3
10- Fanamafisana ny atiny ho an'i Dolibar
11- Fanaraha-maso Dolibar
12- Advanced Gantt ho an'ny Dolibar
Lohahevitra ERP Dolibar maimaim-poanaHiverina any amin'ny DolibarDolibarr vs Sage - Fahasamihafana: iza no ERP tsara indrindra?